CE manyowa anogadzira muchina wezvipfuyo nguruve mupfudze hwindo hweruzhowa
M3600 inotengesa inotengesa yega-inofambiswa nemhepo mhepo compost Turner ye TAGRM. Iyo inogona otomatiki kupedzisa kutendeuka, kumutsa, kusanganisa, kupwanya uye oxygenate iyo composting zvinhu, uye iyo spray system inogona kuwedzera mvura uye kuvirisa kune iyo composting zvinhu.
Kushanda Upamhi: 3600mm
Kushanda Kureba: 1360mm
Kushanda Unyanzvi: 1250m³ / h
High tembiricha manyowainzira yakanaka yekugadzirisa manyowa emombe nezvipfuyo. Inoshandisa tusingaoneki kudzikisira manyowa muzvipfuyo nehuku yehuku, kuti ibudise tembiricha yakakwira, kuuraya hutachiona hwehutachiona, kugadzirisa humus yezvinhu zvakasikwa nekuvandudza kushanda kwefetiraiza. Fermentation fercility (yakadai seMuchina Unosanganisa Muchina) weNanning Tagrm Co, Ltd inogona kubatsira zvakanyanya kubata nezvipfuyo uye mupfudze wehuku.
TAGRM'S Compost Turning Machine inogona kunyatso zadzisa kutendeuka, kusanganisa, kusanganisa, kupwanya uye oxygenate iyo composting zvinhu, uye iyo spray system inogona kuwedzera mvura uye kuvirisa kune iyo composting zvinhu.
Kugadzira Organic fetiraiza ne TAGRM’s manyowa kugadzira muchina?
1. Kuvandudza zvigadzirwa zve organic kusvika panosvika 50%.
2. Gadzirai manyowa matsva kuita murwi.
3. Chinja zvinhu zvekugadzira manyowa nguva nenguva.
4. Ongorora kuvirisa mashandiro.
Muenzaniso M3600 Ground clearance 100mm H2
Rate Simba 95KW, 128PS） Kumanikidzwa kwepasi 0.51Kg / cm²
Rate kumhanya 2200r / min Kushanda upamhi 3600mm Max.
Mafuta anoshandiswa 35 235g / KW · h Kushanda kukwirira 1360mm Max.
Chinokambaira chinotsika 3750mm W2 Kumhanya kumashure L: 0-8m / min H: 0-24m / min
Crawler upamhi 300mm Simbi neshangu Fudza chiteshi upamhi 3600mm
Kukura 4140 × 2630 × 3110mm W3 × L2 × H1 Kutendeuka nharaunda 2600mm min
Kurema 5500kg Pasina mafuta Dhiraivha modhi Hydraulic
Dhayamita ye roller 823mm Nebanga Kushanda chinzvimbo 1250m³ / h
Iyo M3600 compost Turner inozoiswa mu40 HQ Chikamu chikuru chemuchina we compost uchazara munzvimbo dzakashama, zvimwe zvikamu zvichazara mubhokisi kana kuchengetedza kwepurasitiki. Kana iwe uine chero zvakakosha zvinodiwa pakurongedza, isu tinorongedza sekukumbira kwako.
Pashure: TAGRM compost hwindo rinotenderera rezvipfuyo nzou manyowa marara mu zoo
Zvadaro: Wenyika inozivikanwa compost Window Turner yemombe mupfudze
nguruve mupfudze muchina
nguruve mupfudze kugadzira muchina
nguruve mupfudze musanganiswa
yenguruve mupfudze manyowa
nguruve mupfudze hwindi hwindo rinotenderera
Factory mutengo dhadha mupfudze kugadzira machin ...